Iphoyisa ehlazweni lemoto yokwebiwa - Ilanga News
Home Izindaba Iphoyisa ehlazweni lemoto yokwebiwa
Iphoyisa ehlazweni lemoto yokwebiwa
Liboshwe lihamba nentombi yalo ekhulelwe
LINGENE kwelikhulu ihlazo iphoyisa likamasipala waseGoli, liboshelwa ukutholakala lihamba ngemoto eyebiwe eJozini okusolakala ukuthi belihlose ukuyiwelisela eMozambique.
Leli phoyisa eligodliwe igama lalo kuze kube livela phambi kwenkantolo, libanjwe ngamaphoyisa aseJozini abephume umkhankaso wokuzulazula edolobheni laseJozini entathakusa yangoLwesibili.
Kuthiwa umsolwa oneminyaka ewu-35 ubudala, ubehamba nowesifazane oneminyaka ewu-24 ubudala, amchaze njengentombi yakhe. Le moto yohlobo lweFord Ranger 3.2 Double Cap (esesithombeni), yabikwa ngenyanga edlule ukuthi intshontshiwe esiteshini samaphoyisa eCentral Johannesburg.
Le moto itholakale seyifakwe i-number plate yegalofu. Kubikwa ukuthi selokhu yantshontshwa, ibonakale okokuqala kwi-tracker ngoMsombuluko ebusuku okuyilapho kuqalwe khona izinhlelo zokuyilandela, kodwa yabuye yalahleka.
Amaphoyisa aseJozini aqale ukuyilandela ngesikhathi idlula eMachibini ngokugamanxa kwehora lesibili ntambama. Kuthiwa ifike e-17 seyilindelwe njengoba amaphoyisa abesexhumene nasenkundleni yawo yezokuxhumana, iWhatsApp.
Ophenyweni olufushane olwenziwe ngamaphoyisa endaweni yesigameko, umsolwa uveze ukuthi owesifazane ahamba naye, uyintombi yakhe. Kuthiwa uthe akaqali ukuhamba kule ndawo.
UMnu Joseph Ngubane, ongusihlalo wekomidi lomphakathi elilwa nobugebengu eMkhanyakude, futhi elisebenzisana namaphoyisa, uncome ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoyisa aseJozini.
“Kudala sisho ukuthi le nkinga yokuweliswa kwezimoto ihlangani-sa namaphoyisa phakathi. Ngithintwe ngamaphoyisa entathakusa okuthe uma ngifika, ngathola lona wesifazane okhulelwe. Ubehamba nomuntu okhulelwe ngoba enzela ukuba angabuzwa imibuzo eminingi emgwa-qweni.
“Sitholile nokuthi kuyona yonke indawo abemiswa kuyona ubeveza amakhadi asemsebenzini njengoba nalapha eJozini efike wajaha ukuveza ikhadi lomsebenzi, kwasho ukuthi sesihlala siqaphe yonke into. Kasifuni adedelwe engakachazi ukuthi ngobani asebenzisana nabo kulezi zindawo zangapha eMkhanyakude njengoba engowaseBotswana.
“Nakuba esebenza amaphoyisa alapha, kodwa emngceleni oseManguzi namanje ziyaphuma izimoto. Izigilamkhuba kazimile. Ngempelasonto kwedlule izimoto ezingaphezulu kuka-35. Okuzwisa ubuhlungu wukuthi lezi zimoto zintshontshwa kwezinye izifundazwe, zizokhishwa lapha eMkhanyakude,” kusho uMnu Ngubane.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuboshwe owesilisa nowesifazane abatholakale nemoto okwabikwa ukuthi intshontshiwe eGoli. “Bobabili abasolwa kulindeleke ukuba bavele phambi kwenkantolo yemantshi yasoBonjeni maduzane.
“Amaphoyisa aseJozini abepatilola edolobheni laseJozini nge-nkathi ebona le moto okuthe uma becela umshayeli wayo ukuba ame eceleni komgwaqo ukuze izoseshwa le moto, kwatholakala ukuthi yabikwa ukuthi intshontshiwe eGoli ngenyanga edlule,” kusho uCapt Gwala.
Previous articleubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane
Next articlekunyakazise umlazi ukushona kukathisha